Tababare Arsene Wenger Oo Xaqiijiyay In Arsenal Ay La Soo Wareegtay Ciyaaryahan Gervinho | WWW.DARARWEYNE.TK
Tababare Arsene Wenger Oo Xaqiijiyay In Arsenal Ay La Soo Wareegtay Ciyaaryahan Gervinho
Kooxda Arsenal ayaa dhameystirtay heshiiskii ay kula wareegeysay laacibkii kooxda Lille Gervinho, iyadoo tababare Arsene Wenger uu sheegay in labada ciyaaryahan ee Samir Nasri iyo Cesc Fabregas ay sii joogi donaan xilli ciyaareedka danbe garoonka Emirates.
Wenger ayaa warkaan daaha ka qaaday shir jaraa’id oo uu ku qabtay Malaysia oo bilow u ah safar ay ku marayaan Asia.
Kubadsameeyaha Ivory Coast Gervinho ayaa muddo todobaad ah wadahadal kula jiray kooxda Arsenal ka dib markii laga heshiiyay lacagta lagu soo iibsanayo, inkastoo ciyaaryahanka uusan haatan ku biiri doonin kooxda inteeda kale ee ku sugan Asia.
Wenger ayaa intaa ku daray in Nasri uu aad ugu faraxsan yahay Arsenal islamarkaana uu joogi doono, si la mid ah kabtan Fabregas inkastoo lala xiriiriyo inuu u dhaqaaqayo Barcelona.
Fabregas ayaan ka mid aheyn 23 ka ciyaaryahan ee Asia booqashada ku maraya dhaawac uu ka soo kabsanayo aawadeed, sidoo kalena 3 ciyaaryahan oo la filayo inay xagaagan baxaan ayaa iyagana aan ku jirin sida goolhaye Manuel Almunia, Emmanuel Eboue iyo weeraryahan Nicklas Bendtner
« Heshiisyada maanta dhacay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda:
Boqorka William iyo xaaskiisa kate middleton ayaa soo booqdey xarunta hollywood ee kutaalla magaaladda Los Angels »